Memorial University lwaseNewfoundland (UYA) - Study in Canada
Memorial University lwaseNewfoundland
Memorial University of Newfoundland Iinkcukacha
Country : Khanada
isixeko : St. kaYohane
isifinyezo : UYA
Zifumaneke : 1925
abafundi (nama.) : 19000
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Memorial University lwaseNewfoundland
Ukubhalisa kwi Memorial kwiYunivesithi lwaseNewfoundland
Njengoko Newfoundland and Labrador okuphela eyunivesithi, Memorial unyanzelwa ekhethekileyo abantu kweli phondo. Yasekwa esikhumbuzo Newfoundlanders aphulukana nobomi babo phezu kwenkonzo esebenzayo ngexesha lokuQala Second World Wars, University Memorial isenza inkuthazo le mibingelelo izitya zangaphambili njengoko sincedisa ekwakheni ikamva elingcono kwiphondo lethu, ilizwe lethu kwilizwe lethu.
Thina multi-kwikhampasi, multi-disciplinary, kawonke wonke, eyunivesithi zokufundisa / uphando uzibophelele ukugqwesa yonke into esiyenzayo. Sizama ukuba ifuthe yesizwe jikelele, ngelixa ekufezekiseni igunya lethu loluntu ukubonelela ukufikelela kwimfundo yaseyunivesithi abantu beli phondo kwaye igalelo kwezentlalo, yenkcubeko, uphuhliso Newfoundland and Labrador nangaphaya yenzululwazi kunye nezoqoqosho.
Khumbuzo ngaphezu 18,500 abafundi zone iikhampasi ezine kwaye phantse 85,000 alumni esebenzayo lonke ihlabathi. Ukusuka kwinzame zengingqi uphando iiprojekthi inkxalabo yesizwe, impembelelo yesikhumbuzo ka-ziviwa kude.
University Memorial iya kuba ngomnye ziiyunivesiti waziwayo eKhanada nangaphaya, kwaye iya kuzalisekisa imfanelo yalo ekhethekileyo abantu Newfoundland and Labrador.
University Memorial siquka kunikezelwa ezintsha ukubalasela ekufundiseni nasekufundeni noluntu, uphando, yokufunda, msebenzi wo kudala, kwenkonzo kunye nokusetyenziswa kukawonke.
Memorial yamkela kwaye ixhasa abafundi abaphengululi kulo lonke ihlabathi kwaye inegalelo ulwazi nobuchule ekuhlaleni, kuzwelonke nakumazwe ngamazwe.
ukugqwesa: ukugqwesa Ukukhuthaza nokukhuthaza ngokusebenzisa ezintsha kunye nobuchule, ngokutyumzayo kwaye ebambekayo.
imfezeko: Ukunyaniseka kunye neenqobo kuzo zonke iintengiselwano, nokugcina eyona migangatho iphezulu yeenqobo ekufundiseni, uphando, inxaxheba koluntu kunye nenkonzo.
lingane: Ukuzibandakanya abanye ngentlonelo, ukungafihli kunye nakholosa wabasukela injongo efanayo, ngokuthathela ingqalelo abantu, iinjongo kunye neziko liphela.
Ukubandakanyeka neyantlukwano: Lako nokwenza uxanduva ukuqinisekisa iyantlukwano nokulingana.
Ukusabela: Ukwamkela abantu kunye noluntu.
uxanduva: Ukwamkela uxanduva ekufikelelweni iinjongo neenjongo ezifanayo.
Inkululeko kweFidi: Ukuxhasa inkululeko yokungenela ulwazi olusekelwe ubukrelekrele ngamnye kunye noninzi, ukufun'ukwazi, ubuchule kunye nobuchule.
ukwamkelwa: Ukuqonda ukuba, obubambekayo, zonke iinkalo lweshishini eyunivesithi kuquka ukufundisa nokufunda, uphando, yokufunda, umsebenzi ubugcisa kunye nokusetyenziswa kukawonke.
Uxanduva endaweni: Ukuxatyiswa nokuphumeza imbopheleleko ekhethekileyo abantu Newfoundland and Labrador ngokuxhasa kunye nokuxhotyiswa ngokugqwesa ukuba:
intswelo kunye namathuba Newfoundland and Labrador;
usebenzisa yunivesiti kwimiba ebalulekileyo yesizwe neyamazwe ngamazwe;
ivelisa yaye liqhuba izifundo zemfundo zeHEAT yesizwe neyamazwe ngamazwe; yaye,
ingqalelo amathuba olutshintshatshintshayo thaca liziko multi-kwikhampasi.
Uxanduva kubafundi: Eqonda ukuba abafundi njengeprayorithi yokuqala nokubonelela okusingqongileyo kunye nenkxaso ukuqinisekisa impumelelo yabo ezifundweni kunye zobuqu.
intsebenziswano ahlukeneyo: Ukuxhasa imixholo ephambili kuzo zonke izinto olubandakanya iiyunithi zemfundo ukujongana amathuba ezibalulekileyo kunye nemingeni apho Memorial ngokukodwa ibekwe kakuhle ukwakha kuzwelonke kunye nakumazwe ngamazwe.
uzinzo: Ukusebenza ngendlela ngokwakokusingqongileyo, ngokwezoqoqosho nangokwasekuhlaleni oluzinzileyo ulawulo, iinkqubo zemfundo kunye nophando.
University Memorial ezisixenxe ezine, nganye nasongo kunye nomtsalane. kwidolophu enkulu yephondo, St. kaYohane, likhaya kwi-St. kwikhampasi kaYohane leyo inika uluhlu olupheleleyo lweenkqubo zemfundo yanamhla, isicwangciso ezidolophini. Kwakhona ibekwe St. KaYohane ngoyena theMarine Institute, ophambili kwiziko Canada ngayo lwezokuloba noqeqesho zaselwandle kunye enye izibonelelo inkulu elwandle zemfundo ehlabathini. Grenfell Campus, ibekwe Corner Brook ngomhla wembonakalo kunxweme olusentshona wesiqithi, umntu wezobugcisa melo kunye nenzululwazi campus specialising kwiinkqubo zokusingqongileyo nezelinen ubugcisa.
amathuba okufundisa nokufunda yesikhumbuzo ka-ukulandisa kwiphondo Newfoundland and Labrador. Kwi United Kingdom, le Harlow Campus, Imi kwidolophu ezaphelelwa of Old Harlow, Essex, na indawo ephakamileyo eyodwa apho ukufunda, uphando, uze uphonononge kwi European Union.
Ngaphezu koko, Memorial yeYunivesithi 450 izifundo zemfundo umgama kwenza kube lula ukwandisa eklasini yakho ngaphaya kwemida, ekwenza ukuba u kuhlola ezifundweni naphi na ehlabathini.
Bachelor kulawulo lweshishini
Bachelor of Commerce (intsebenziswano-op)
isidanga International lolawulo lweshishini
isidanga Joint okanye ubugcisa kunye Bachelor of Commerce (intsebenziswano-op)
Bachelor of Education (ephambili / ezinesiqalelo) njenge isidanga sokuqala
Bachelor of Education (ephambili / ezinesiqalelo) njengoko isidanga sesibini
Bachelor of Education (aphakathi / esiyisekondari)
Bachelor of Education (aphakathi / esiyisekondari) conjoint neDiploma ngeteknoloji yemfundo
Bachelor umculo conjoint kunye isidanga kwimfundo umculo
Bachelor kwemfundo umculo (njengoko isidanga sesibini)
Bachelor yemfundo eyodwa
Human Kinetics noLonwabo
Bachelor of kinesiology (intsebenziswano-op ekhoyo)
Bachelor yokuzihlaziya (intsebenziswano-op ekhoyo)
Bachelor of physical education (intsebenziswano-op ekhoyo)
Eyoluntu Social Sciences
isidanga Joint kwezobugcisa Bachelor of Commerce (intsebenziswano-op)
Ugqirha of Medicine
Isithwala ndwe sezobugcisa (ikhemesti)
Isithwala ndwe sezobugcisa
Bachelor umsebenzi wentlalo
Memorial University of Newfoundland yiYunivesithi non-zobuhlelo in St Johns, Newfoundland. University Memorial waqala njengoko Memorial University College (MUC), leyo yavulwa ngoSeptemba 1925 ngexesha campus ngomhla Parade Street St. kaYohane.
Umongameli wokuqala J. L. Paton. Kwakubenza kwiminyaka emibini yokuqala zaseyunivesithi. ubhaliso okokuqala MUC yaba 57 abafundi, unyuka usiya kwincopho kwama 400 kwi 1940. in 1933 oko yahlanganiswa kunye School kufuphi kwesiqhelo wathabatha uxanduva kuqeqesho lootitshala. Kwiminyaka yokuqala yeKholeji, njengoko wafumana inkxaso eninzi evela Carnegie Corporation yaseNew York.
Ikholeji yasekwa esikhumbuzo Newfoundlanders abaphulukene nobomi babo phezu kwenkonzo esebenzayo ngethuba leMfazwe yokuQala yeHlabathi. kamva Kuye langumbhiyozo kuqulatha ufile imfazwe zephondo yeSibini kweMfazwe Yehlabathi. Alan Beddoe wayila iingubo izixhobo kwiSikhumbuzo University of Newfoundland. Urhulumente post-Confederation uwuphakamisile iwonga Memorial University College ukuba iwonga kwiyunivesithi ngokupheleleyo Agasti 1949, nokuthiywa iziko Memorial University lwaseNewfoundland. University Memorial yasekwa yiYunivesithi Memorial Act.
Amanani kunyaka wokuqala Mun yaba 307 abafundi. in 1961, ubhaliso akuba lanyuka ukuya 1400, Mun bafuduka Parade Street kwindawo yayo zangoku kwi Elizabeth Avenue (Campus Main).
phezu 8 EyoKwindla 1965, urhulumente Newfoundland wabhengeza neefizi ivideo kubafundi yokuqala yonyaka ababhalise kwiYunivesithi Memorial eSt. kaYohane. I-Faculty of Medicine of Memorial University of Newfoundland yasekwa 1967, kunye nabafundi okuqala lamkelwa 1969. Oku uyavuma malunga 80 abafundi kwi M.D. inkqubo ngonyaka ngamnye, kwaye inika M.Sc. kunye iPh.D. iinkqubo.
Mun igcina campus in Harlow, ENgilani vuleka abafundi 1969. Le nxalenye yekholeji bekusoloko indawo obalulekileyo internship in Education, kwaye ngoku inikezela izifundo ngetyala, phantsi umsebenzi, kunye internship eziliqela kwiindawo. Kwikhampasi lamkela malunga 50 abafundi.
KwiSikhumbuzo yaseka leInstitut Frecker eSt. Pierre kwi 1973, yokufunda olunye-gatha iinkqubo ngokuntywiliselwa French. Kuye ayehlala kwisakhiwo ezibonelelwa yi-Archdiocese St. Pierre de 2000. Ngoku eyaziwa ngokuba Programme Frecker, oko kungoku ukusuka FrancoForum, indawo yokufundisa ulwimi olunayo urhulumente St. Pierre. Le program inxenye kuxhaswa oorhulumente Canada kunye Newfoundland and Labrador.
ngoSeptemba 1975 ikhampasi yavulwa Corner Brook; oko labizwa yokuqala Sir Wilfred Grenfell College 1979 igama kwakhona 2010 njengoko Grenfell Campus, Memorial University lwaseNewfoundland. ngoku 1300 abafundi baye Grenfell, nelinika iinkqubo ngokuzeleyo kwinkalo ezininzi, kuquka buzobi, neenkqubo buso, leyo igqitywe kwikhampasi, kwezinye izifundo ezininzi.
in 1977, kwiSikhumbuzo University of Newfoundland leMfundo Television Centre liphumeze le projekthi Unyango.
in 1992, Institute of Ukuloba Marine Technology in St. John zaba baseyinxalenye Mun njengoko Ukuloba Marine Institute of Memorial University lwaseNewfoundland. Namhlanje njengokubizwe le Marine Institute of Memorial University lwaseNewfoundland. Ibonelela ngeenkqubo zombini abanesidanga non-isidanga.
in 2008, Inkqubo yokuqesha eyunivesithi ukuze abongameli ongenayo weza phantsi koqwalaselo uphazamiseko kwezopolitiko kumfundisi lemfundo yephondo, joan Shea.
Uyafuna ukuxoxa Memorial University lwaseNewfoundland ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Memorial University of Newfoundland on Map
iifoto: Memorial University lwaseNewfoundland ezisemthethweni kwiFacebook
Memorial University of ncomo Newfoundland
Dibanisa ukuxoxa of Memorial University lwaseNewfoundland.
Okunye iiyunivesithi Canada
University yokumkanikazi Kingston
University saseSherbrooke saseSherbrooke
ULaval University Québec City